Huawei waa nooca ugu iibinta badan ee looxa Android | Androidsis
Suuqa kiniiniyada Android waa mid aad u ballaaran, sida xulasho ballaaran oo la heli karo, siinta dhammaan noocyada munaasabadaha. In kasta oo qaybta guud ahaan ay ku badan tahay shirkadda Apple noocyadeeda kala duwan ee Ipad-yada. Noocyada ku jira Android, Samsung waligeed waxay ahayd nooca ugu badan ee iibiya, marka lagu daro inuu yahay midka soo saara moodooyinka ugu badan, dhowr sano ayuu naga tagay. Laakiin Kuuriya ayaa hada lumisay hogaanka.
Maaddaama ay hadda tahay Huawei oo qaadaya booska koowaad ee qaybtan suuqan. Calaamadda Shiinaha ayaa ka sarreysa Samsung rubuckan koowaad ee sanadka, si ay u noqoto nooca ugu caansan kiniiniyada Android. Halka ay Huawei wali ka fogtahay la qabsiga Apple.
Rubucii koowaad ee sanadkan 37,15 milyan oo kiniin ah ayaa lagu iibiyay adduunka oo dhan. Sidii caadada u ahayd, Apple waxay heshaa cufka ugu weyn ee keegga qoyskiisa iPad-ka. In kasta oo ay macquul tahay inay tahay shirkadda Huawei ee bixisay layaabka ugu weyn iyada oo ay ugu mahadcelinayaan iibinta MediaPads.
Nooca Shiinaha ayaa ilaa hadda ku jiray booska afaraad ee suuqa. Mawqifkan ayay xirtay dhamaadkii sanadkii hore. Laakiin saddexda bilood ee sannadka ugu horreeya waxay qaadatay boodboodka inuu isku muujiyo inuu yahay kan labaad ee suuqa. Marka waa nooca ugu iibinta badan ee Android, booska ka xaday Samsung.
Warka qayb ahaan layaabka leh, maxaa yeelay shirkadda Huawei ma soo bandhigin war sannadkan ah. Halka Samsung ay naga tagtay horeba dhowr kiniin ah bilaha ugu horeeya sanadka. Sidaa darteed, waxay u badan tahay in shirkadda Kuuriya ay ku dhammaan doonto dib ula soo noqoshada booskan bilaha soo socda.
Waxay sidoo kale muujineysaa kororka iibka ee 'Surface Microsoft' qaybtaan, sidaa darteed waxay horeyba u yihiin shanaad suuqa. Shaki la'aan, kiniiniyadu weligood ma dhammaanin markay baxaan, iPad mooyee. Laakiin Huawei waa war kale oo wanaagsan, ka dib markii cajiib ah iibinta oo kordhay taleefoonadooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei waxaa loo caleemo saaray inuu hoggaamiye ka noqdo suuqa kiniiniga Android